2018 Mercedes-Benz GLE400 ọnọdụ siri ike ｜ Mepee oge ụgbọ ala okomoko dị elu 2018 Mercedes-Benz GLE400 ọnọdụ siri ike ｜ Mepee oge ụgbọ ala okomoko dị elu - LFOTPP
2018 Mercedes-Benz GLE400 ọnọdụ siri ike ｜ Mepee oge ụgbọ ala okomoko dị elu
2018 Mercedes-Benz GLE400 dị nro n'ụzọ dị nro.
Nnukwu oghere dị na ihu ihu nwere ụdị AMG dị iche, na wiil ndị nwere nnukwu na breeki discs na-ekpughe ikuku ikuku ike. Mercedes-Benz GLE400 willow ụdị ọkụ ihu, anya nku anya LED, ihu ala, akara Mercedes-Benz nke na-enweghị ntụpọ, nnukwu ikuku ikuku na-ewepụta ụdị ọhụụ na-enwere onwe ya ma dịkwa mfe.
Sparkling chrome trimint willment the styling the body, si n'ihu skid plate ruo na imewe na nnukwu windo akụkụ.
Nnukwu ogwe chrome chigharịrị na-apụta ìhè na ala ma na-ele anya dị ukwuu.Ihu ikuku n'ime ụlọ nke Mercedes-Benz GLE400 dị oke ọnụ, na bọtịnụ arụmọrụ dịtụ mfe na-eme ka arụ ọrụ ahụ dị nkenke.
Ntọala nke ụgbọ ala ọhụrụ a lekwasịrị anya na njikwa igwe okwu, ekwentị na kọmputa ịnya ụgbọ ala. Ọhụụ nke Mercedes-Benz GLE400 kwekọrọ na ime nke console etiti, na-ewetara ndị bi n'ime ụlọ okomoko na-enweghị njedebe, yana ikuku dị elu na okomoko nke Mercedes-Benz.
Ime ime nke 2018 Mercedes-Benz GLE400 dị mma karịa, n'agbanyeghị na enweghị ike iji ya na usoro sedede Mercedes-Benz, mana o nwere nnukwu ihuenyo. Onye nwe ya kwuru na ime ụlọ nke Mercedes-Benz na-achọ ya kemgbe ụwa, ọkachasị ụdị ejiji dị na njikwa etiti, yana ihuenyo njikwa etiti na-egosipụta ezigbo echiche.
Oche ihu na azụ nke 2018 Mercedes-Benz GLE400 dị ezigbo nso na ahụ, nkwado dị n'akụkụ abụọ ahụ dịkwa ịtụnanya. Ekpuchie oche ahụ na akpụkpọ anụ ma na-akwado ebe a.
A na-ahazi isi oche ahụ ma nwee ike ịhazie ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị iji chebe akpụkpọ ụkwụ nke nwanyị dị mma.2018 Mercedes-Benz GLE400 oche dị mma, oche oche dị ogologo, nkwado ụkwụ na-adị, na idozi azụ akụkụ azụ. na-akwado, ma akụkụ ezi uche dị na ya nwere ike belata ike ọgwụgwụ nke njem dị anya.
Ogwe aka dị n'etiti dị larịị, mana ogologo ya dị mkpụmkpụ, ọkachasị mgbe etinyere iko ahụ, nkasi obi nke ịda ga-ebelata. Enwere ike iweda oche ọdụ azụ na ogo 4: 6. Mgbe ị na-echekwa ihe dị ogologo, enwere ike wedata oche ahụ, akụkụ nke ọzọ nchekwa ahụ nwekwara ike ịnabata njem ahụ.
Ihe ngosi 2018 Mercedes-Benz GLE400 na-agbaso ụdị akụkụ anọ nke AMG, mana ọgụgụ akwụkwọ nke ọdụ ụgbọ ekupu bụ naanị ihe eji achọ mma, na ezigbo anwụrụ ọkụ bụ otu akụkụ. Igwe ọla ọcha nke ọla edo 20 nke anụ ọhịa ise nke nwere alloy ise nwere aka na-ele anya, na-enwe taya arụmọrụ Pirelli ultra-elu na ngwongwo dị elu.
Pịa Ahịa ụgbọ ala N'ahịa ọnụahịa